သူမအရမ်းချစ်ရတဲ့ အမေဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို Video call ဖြင့်သာ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဆို့နစ်ကြေကွဲခံစားနေရတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည် – Cele Posts
သူမအရမ်းချစ်ရတဲ့ အမေဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို Video call ဖြင့်သာ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဆို့နစ်ကြေကွဲခံစားနေရတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခွန်းဆင့်နေခြည်ရဲ့ မိခင် ကတော့ မေလ ၁ ရက်နေ့က နှလုံးအမော ဖောက်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီနော်။ သူမဟာ ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ချက်ခြင်း ပြန်လာဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးကိုတောင် လိုက်ပို့ခွင့် မရတဲ့ သမီးအတွက်ကတော့ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု တစ်ခုပါပဲနော်။
ဒီနေ့ မှာတော့ ခွန်းဆင့်နေခြည်ရဲ့ မေမေ့ကို ဂူသွင်းသပြိုလ်ပြီးစီးခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ခွန်းဆင့် ကတော့ အမေ့ရဲ့နာရေးကို video call ဖြင့်သာ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ မြင့်မိုရ်တောင်ကြီး ပြိုကျသွားသလို ခံစားနေရတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည် အတွက် အားပေးစကားများ ပြောသွားကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ။
” မေမေ့ကိုဂူသွင်း သဂြိုလ်ပြီးပါပြီ အဝေးကနေကန်တော့ပါတယ်မေမေ••• သမီးကိုစိတ်ချဖို့နဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြတ်ပြီး ကောင်းမွန်ရာဘုံဘဝမှာအနားယူပါမေမေ လို့သမီးပြောတာတွေမေမေကြားသိပါစေ “ လို့ ခွန်းဆင့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဝမ်းနည်းစကားတွေ ပြောထားပါသေးတယ် ပရိသတ်င်္ကြးရေ….
သူမအရမျးခဈြရတဲ့ အမဖွေဈသူရဲ့နောကျဆုံးခရီးကို Video call ဖွငျ့သာ ကွညျ့ခှငျ့ရတဲ့အတှကျ ဆို့နဈကွကှေဲခံစားနရေတဲ့ ခှနျးဆငျ့နခွေညျ
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခှနျးဆငျ့နခွေညျရဲ့ မိခငျ ကတော့ မလေ ၁ ရကျနကေ့ နှလုံးအမော ဖောကျပွီး ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါပွီနျော။ သူမဟာ ပွညျပနိုငျငံသို့ ရောကျရှိ နတော ကွာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အခုခြိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံကို ခကျြခွငျး ပွနျလာဖို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျပါဘူးနျော။ အမရေဲ့ နောကျဆုံး ခရီးကိုတောငျ လိုကျပို့ခှငျ့ မရတဲ့ သမီးအတှကျကတော့ အကွီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးနဈနာမှု တဈခုပါပဲနျော။
ဒီနေ့ မှာတော့ ခှနျးဆငျ့နခွေညျရဲ့ မမေကေို့ ဂူသှငျးသပွိုလျပွီးစီးခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ ခှနျးဆငျ့ ကတော့ အမရေဲ့နာရေးကို video call ဖွငျ့သာ ကွညျ့ခှငျ့ရတဲ့အတှကျ ဝမျးနညျးစှာ ငိုကွှေးနတော ဖွဈပါတယျနျော။ မွငျ့မိုရျတောငျကွီး ပွိုကသြှားသလို ခံစားနရေတဲ့ ခှနျးဆငျ့နခွေညျ အတှကျ အားပေးစကားမြား ပွောသှားကွပါဦး ပရိသတျကွီးရေ။
” မမေကေို့ဂူသှငျး သဂွိုလျပွီးပါပွီ အဝေးကနကေနျတော့ပါတယျမမေေ••• သမီးကိုစိတျခဖြို့နဲ့ သံယောဇဉျတှဖွေတျပွီး ကောငျးမှနျရာဘုံဘဝမှာအနားယူပါမမေေ လို့သမီးပွောတာတှမေမေကွေားသိပါစေ “ လို့ ခှနျးဆငျ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာတှငျ ဝမျးနညျးစကားတှေ ပွောထားပါသေးတယျ ပရိသတျင်ျကွးရေ….
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေချိန် သူငယ်ချင်းမွေးနေ့မှာ မြူးတူးပျော်ပါးနေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်များ